Maanso Ku Saabsan Carruurta Derbijiifka Ah Oo Saamayn Yeelatay | Gacanlibaaxnews
Maanso Ku Saabsan Carruurta Derbijiifka Ah Oo Saamayn Yeelatay
Maansdaan oo uu halabuuray Cabdirxiin Siddiiq “Heello” ayaa si qoto dheer uga hadlaysa waayaha nololeed ee carruurta derbijiifka ah. Waa kan isaga oo ka sheelaynaya sidii uu u sameeyey maansada: “Muddo ayaa ka soo wareegtey milaygii ay tixdan derbi-jiif ku soo baxdey. Waa tixdii iigu adkayd hal-abuurideeda laba arrimood dartood: 1. Aniga oo dheregsan in ay adagtahay in aan cabbiro dareenka qof gaajoonaya . 2. Aniga oo faraxsan in ay adag tahay in aan ka war tebiyo rabitaanka qof murugaysan. Sidaa darteed ayaan afar dharaarood wakhti ula qaatey bal in aan la dareen noqdo si aanan xuquudooda iyo gudbinta rabitaanooda aanan ugu xad-gudbin. Waxa aan xasuustaa wiil ka mid ah mar aan waydiiyey xilliyada ugu naxdinta ama murugada badan noloshiisa waxa uu iigu war-celiyey laba xaaladoid . 1. Marka uu roobku soo yeel-yeesho ama uu gu’gu curto waxa aa ku xasuustaa mataantii ila dhalay iyo daadkii qaadey aniga oo arkaya . 2.marka aan arko wiil da’dayda ah oo direyskii dugsiga ku gaashaaman iyo aniga oo safrad la daaduumaya . Waxa aan ka naxaa labada dabaqad ee noloshu na kala geysey.” Ayuu yidhi halabuur Cabdirixiin.
Waa kuwan erayadii maansadu:
Duruuf adag baan ku koray
Daryeel hooyana ma helin
Dadaal aabana ma arag
Tol iyo xidid ii damqada
Dadkana kuma lihi walaal
Waxaan u hoydaa derbiga
Baahida dacalkayga taal
Ayaa dawarsiga I baray
Dar-xumo badan baan qabaa
Dubkayga waxaa ku shidan
Dab kuu waayuhu i sudhay
Han-doora mar baan lahaa
Damiir togan baan lahaa
inaan dadka caawiyoo
Digtoor noqdo waan jeclaa
Waxseen la dakaamayaa
Dantiyo waayaha i xidhay
Dulliga nolosheen ku jiro
Diiftayda waxaan arkaa
Da’daydu markay tagaan
Dugsiga iyagoo qurxoon
Ayaan qudha deeq ma helin
Farxadda waan kala didnaa
Waxaan gashadaa direys
Maryaha duugeed qubtaan
dux iyo iidaan ma cuno
Dugaag waxaan qaybsanaa
Hambada aad daadisaan
Badh baa daacuun u go’ay
Markay waayeen dabiib
Badh bay dhaxamuhu dileen
Duufaankiyo qabowga daran
Badh baa daad soo rogmaday
Habeen dumay uu la tegey
Naftooda badh baa del-deley
Markay dunidii naceen
Aqoon-yahan nama dersaan
Xaaladda derbi-jiifku yaal
Digriga culimada waddaa
Dar-alle nooguma hadlaan
Dastuurkuna wuu na gabay
Qoraaguna wuu dagay
Dad-waynaha uma ban-dhigo
Ciilkiyo dacas kaa na dhibay
Rag iyo dumar baanu nahay
Da’ iyo dhallin baanu nahay
Abaydin la dayriyee
Waxaanu rabnaa dareen
Daryeel iyo nolol habboon
Halabuur Cabdirixiin Sidiiq “Heello”